ကြာသပတေး သားသမီးလေးတစ်ယောက်နဲ့ ချစ်သူဖြစ်နေပြီးလား။ ဒါဆိုဂုဏ်ယူလိုက်ပါတော့.! - Tameelay
ကြာသပတေး သားသမီးလေးတစ်ယောက်နဲ့ ချစ်သူဖြစ်နေပြီးလား။ ဒါဆိုဂုဏ်ယူလိုက်ပါတော့.!
ကြာသပ​တေးသားသမီးအများစုဟာ တစ်ယောက်ဆိုတစ်ယောက်ပဲ သူ့တို့စိတ်ထဲမှာ စွဲမြဲပြီး ချစ်တတ်ကြပါတယ်​..။
ကိုယ့်​ ချစ်​သူအ​ပေါ်ပဲ နွဲ့ဆိုးဆိုးတာပါ..။
သူစိမ်းဆိုရင်​ ကိုယ်​မစားရရင်​ ​နေပါ​စေ..!
သ​ဘော မ​နော အရမ်း​ကောင်းကြပါတယ်​..။
ဒါ​ပေမယ့်​ နှစ်​သိမ့်​ ​ပေးမယ့်​သူမရှိလည်းကိုယ့်​ဘာသာ ​ဖြေသိမ့်​နိုင်းစွမ်း ရှိကြတယ်​..။
အခက်​ခဲပြဿနာနဲ့ ကြုံ​တွေချိန်​မှာဆိုရင်​ပြာယာမခတ်​ဘဲ ​ဖြေရှင်းမယ်​ နည်းလမ်းကို​အေး​အေး ဆုံးဖြတ်​နိုင်​စွမ်းရှိကြပါတယ်​.။
အပြင်ပန်းကြည့်ရင်မာနကြီးတယ်ထင်​ရ​ပေမယ့်​သူတို့နဲ့ ရင်းရင်းနှီး​ပေါင်းကြည့်​မိရင်​ သိသာပါတယ်​
သူငယ်​ချင်း မိတ်​​ဆွေ​တွေရဲ့ အခက်​အခဲ​တွေကိုကိုယ့်​ပြဿနာလို ဝင်​​ရောက်​ကူညီလွန်းလို့တခါတခါ ​စေတနာ ​စော်​ကားခံရပြန်​ကျတယ်​။
သူ့တို့ဟာ စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းကို မက်မောပြီး တခါတလေတစ်ယောက်ထဲပဲအေးအေးဆေး²​နေထိုင်ချင်သူလေးတွေပါပဲ။
သူ့တို့ဟာ စိတ်ရှုပ်ရမယ့်အရာတွေကို သိပ်မတွေးချင်သူများလည်းဖြစ်တယ်။
ကြာသပ​တေးနဲ့ လက်​တွဲ​ဖော်​အလိုက်​ဖက်​ဆုံး​နေ့နံက​တော့ အဂါင်္သားသ္မီးများပဲ ဖြစ်​ပါတယ်​။
ရန်​ဖက်​ ​နေ့နံက​တော့ စ​နေ သားသ္မီးများပါ..။😂
သူ့တို့ဟာ မိဘအပေါ်မှာလည်း အရမ်းချစ်သလို..
ကွာသပတေးသားသမီးအမြားစုဟာ တဈယောကျဆိုတဈယောကျပဲ သူ့တို့စိတျထဲမှာ စှဲမွဲပွီး ခဈြတတျကွပါတယျ..။
ကိုယျ့ ခဈြသူအပျေါပဲ နှဲ့ဆိုးဆိုးတာပါ..။
သူစိမျးဆိုရငျ ကိုယျမစားရရငျ နပေါစေ..!
သဘော မနော အရမျးကောငျးကွပါတယျ..။
ဒါပမေယျ့ နှဈသိမျ့ ပေးမယျ့သူမရှိလညျးကိုယျ့ဘာသာ ဖွသေိမျ့နိုငျးစှမျး ရှိကွတယျ..။
ပွာယာမခတျဘဲ ဖွရှေငျးမယျ နညျးလမျးကိုအေးအေး ဆုံးဖွတျနိုငျစှမျးရှိကွပါတယျ.။
အပွငျပနျးကွညျ့ရငျမာနကွီးတယျထငျရပမေယျ့သူတို့နဲ့ ရငျးရငျးနှီးပေါငျးကွညျ့မိရငျ သိသာပါတယျ
သူငယျခငျြး မိတျဆှတှေရေဲ့ အခကျအခဲတှကေိုကိုယျ့ပွဿနာလို ဝငျရောကျကူညီလှနျးလို့တခါတခါ စတေနာ စျောကားခံရပွနျကတြယျ။
သူ့တို့ဟာ စိတျကူးယဉျခွငျးကို မကျမောပွီး တခါတလတေဈယောကျထဲပဲအေးအေးဆေး²နထေိုငျခငျြသူလေးတှပေါပဲ။
သူ့တို့ဟာ စိတျရှုပျရမယျ့အရာတှကေို သိပျမတှေးခငျြသူမြားလညျးဖွဈတယျ။
နနေံ့ကတော့ အဂါင်္သားသ်မီးမြားပဲ ဖွဈပါတယျ။
ရနျဖကျ နနေံ့ကတော့ စနေ သားသ်မီးမြားပါ..။😂
သူ့တို့ဟာ မိဘအပျေါမှာလညျး အရမျးခဈြသလို..
ဗိုလ်ချုပ် – စိတ်ကူးနှင့် လက်တွေ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း သည် မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး ဗိသုကာ ဖြစ်သည် ။ လွတ်လပ်ရေး ဗိမာန်ကို တည်ဆောက်ပေးသူဟုဆိုလိုသည်။ သို့သော် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် လွတ်လပ်ရေး ဗိမာန်ကို တည်ဆောက်ပေးရုံမျှသာ ပေးခဲ့သည် မဟုတ်။ ထိုဗိမာန်ကြီး အဓွန့်ရှည်စွာ တည်မြဲစေရန် အလို့ငှာ အနာဂတ်ကို …
သင့်ကို အသက်အန္တာရာယ်ပေးနိုင်သော အပြုအမူ (၁၀) မျုိး…
သင့်ကို အသက်အန္တာရာယ်ပေးနိုင်သော အပြုအမူ (၁၀) မျုိး ၁။ ငါးစားခြင်း အချို့ငါးများ၏ ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင် မာကျူရီများရှိနိုင်ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ အချို့မွေးမြူရေးငါးများကို ပိုးသတ်ဆေးသုံးထားသောကြောင့် နေ့စဉ်စားသုံးမိပါက သင့်ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ၂။ ရေနွေးအိတ်သုံးခြင်း ရေနွေးအိတ်များကို အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသော ပလတ်စတစ်မျိုးနှင့် ပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့် ကြာရှည်အသုံးပြုပါက သင့်ကို ကင်ဆာရောဂါများ၊ …
အနာစိမ်းပေါက်မောင်မကြောက်ခွေးတောက်ရွက်ကိုရှာ˝ ̏ မင်းအနာကြီ်းကလည်းကြောက်စရာကြီး၊အရောင်လည်းမလျော့ဘူး˝ ̏ ဟုတ်တယ်…ဆေးထည့်တာပဲ၊ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး မန်းဝင်ပြီးပြည်တည်တာ ကိုက်တာလွန်ရောပဲ ˝ ။ မြန်မာ့ဆေးဝါးပင်စာအုပ်ထူးကြီးကိုဖတ်ထား၍ မှတ်မှတ် သားသားခွေးတောက်ရွက်အား သတိရမိတော့သည်။ “̏ခွေးတောက်ရွက်ကို မီးကင်းပြီးကပ်လိုက်” “ငါပြောတာမဟုတ်ကျမ်းကပြောတာ˝ အမှန်ပင် သူငယ်ချင်း၏အနာစိမ်းရင့်၍ ပြည်ပေါက်ကာ ပျောက်ကင်းခဲသည်ကို မှတ်မိနေတော့သည်။ မိမိကိုယ်တိုင်မယုံကြည်ခဲ့ပါ။သို့သော်တကယ် ပျောက်လေသည်။အရက်သောက်တတ်သူတို့က ကြက်ခွေး တောက်ဟင်းချိုကို …